Nivoaka amin’ny fanginany… :tsy manaiky ny hisamborana an’i Lylison ny Mapar | NewsMada
Nivoaka amin’ny fanginany… :tsy manaiky ny hisamborana an’i Lylison ny Mapar
« Manameloka ny tsy fanarahan-dalàna amin’izao didy fampisamborana ny loholona Lylison izao izahay ary tsy hanaiky izany fisamborana izany », hoy ny fanambaran’ny Mapar, novakin’ny mpitondra teny, Pierre Houlder, tetsy Ambodivona, omaly. Notsiahiviny avy eo fa hiara-dia amin’izy ireo amin’izany ny vahoaka, hijoro ho vavolombelona. Samy nanitrikitrika izany tsy fanarahan-dalàna izany na ny minisitry ny Fitsarana teo aloha sady depiote, Razanamahasoa Christine sy ny kaomisera sady depiote, Razafitsiandraofa Brunel. « Misy fetrany ny fahatrarana ambodiomby ka na amin’iny andro iny na iray andro taorian’izay farafahelany. Nahoana no tsy nosamborina izy ? Mahagaga fa miaro ny tsy rariny ny mpahay lalàna sady manova ny atao hoe tratra ambodiomby », hoy izy ireo.
Heloka sy fahotana ny filazana ny marina
Nametra-panontaniana maromaro manoloana ity « Raharaha Lylison » ity ny Mapar ka anisan’izany ny amin’ny hoe hampanjakaina eto ve ny jadona ka tsy azo atao intsony ny fanehoan-kevitra malalaka. « Heloka sy fahotana mahafaty ny fijoroana hilaza ny marina momba ny zava-misy iainan’ny vahoaka, efa nambaran’ny eveka katolika… Hapetraka ho zava-pady ny fiarovana ny vahoaka sy ny ftiavan-tanindrazana ka sokajina ho tratra ambodiomby ? », hoy izy ireo.
Mbola napetraky ny Mapar koa ny fanontaniana fa fanonganam-panjakana ve ny fiantsoana ny mponina hisaina am-pilaminana any an-trano tsy misy korontana sy hampisaina am-pilaminana ny mpitondra momba izao zava-misy izao ?
Miantso ny tokony hampitsaharana ny fitiavan-tena sy ny kolikoly ary koa ny varo-boba ny harem-pirenena sy ny tanindrazana ny Mapar. « Aoka ho ny tombontsoan’ny vahoaka no katsahina », hoy ihany izy ireo.
Tsy afa-bela ny mpomba an-dRavalo ny taona 2009
Anisan’ny nanontanian’ny mpanao gazety azy ireo koa ny amin’ny hoe efa nanao tahaka izao koa ny fitondrana Rajoelina tamin’ny foton’androny. Nilaza ho tsy nisambotra izany anefa ireto olon’ny fitondrana Tetezamita ireto. Ririnin-dasa tsy tsaroana tokoa ? Tsy afa-bela fa nitsoaka sy niafina na nigadra ireo mpomba an-dRavalomanana, nanomboka ny 2009. Tao ireo naratra na rava fananana sy namoronana antontan-taratasy… Niharan’ny baomba lakrimozenina matetika raha nikasa haneho hevitra : Kianjan’ny demokrasia sy ny 13 mey Analakely ary teny Anosy.
Araka izany, tokony hampandinika ny rehetra : ny mpitondra sy ny mpanao politika, ny tsy hiverenan’izany rehetra izany intsony ka tsy hifandimby hifanagadra sy hifampisambotra na koa hifanao sesitany lava eto isika. Hilaozan’ny firenen-kafa sy hahantra lalandava ary ho sasatry ny miarina.